INONA NO A 'hahavita'?
Ny fitoeran-javatra ny vozony farany mamaritra ny habe sy ny karazana fanakatonana ilaina ny fanatratrarana ny mety tombo-kase. Ny fitoeran-javatra sy ny satroka mifanaraka dia tsy maintsy manana mifanandrify vita. Fa ny tanjona, dia handinika roa samy hafa vita randram-sy ny fomba hamantarana tsirairay. Ny fonosana Glass Institute (GPI), ny fikambanana ara-barotra misolo tena ny Amerika Avaratra orinasa fitaratra fitoeran-javatra, dia naninjitra ny politika mba manara-penitra ny tendany vita manerana ny orinasa.
Mitohy Thread -abbreviated "CT", mitohy kofehy fanidiana dia nekena ho isa roa tafasaraka iray backslash (Eks. 38/400). Ny isa voalohany manondro ny savaivony nomena ny fanakatonana, izay refesina amin'ny millimeters. Ny isa faharoa, hita araka ny backslash, manondro manokana fomba farany.
Lug -also fantatra ho toy ny "manolan-Off" farany (nohafohezina "T / O"), Lug vita dia hita ao amin'ny fitaratra fotsiny kaontenera. Lug vita dia afaka ho toy ny savaivony (izany hoe 38mm) arahin'ny T / O (nohafohezina noho ny manova-Off) -38mm T / O
Ny any ivelany ny kofehy savaivony. Ny fandeferana isan-karazany ny "T" lafiny no hamaritra ny vady eo amin'ny tavoahangy sy ny fanakatonana.
Ao anaty siny hoditra savaivony ny vozony. Specifications mitaky ny kely indrindra "I" mba mamela ny fangatahany fahazoan-dalana noho ny famenoana fantsona. Linerless fanidiana, miaraka amin'ny plug na tany tombo-kase, sy fizarana plugs sy fitments mitaky ny maso "I" ny lafiny tsara fa mety.
Norefesiny hatramin'ny tampon'ny hatramin'ny farany an-tampon'ny lelan-kofehy voalohany. Ny "S" lafiny no ilaina izay mamaritra ny fironana ny fanakatonana ny tavoahangy sy ny habetsaky ny kofehy notarihin'ny eo ny tavoahangy sy ny satrony.
Ny any ivelany savaivony ny vozony. Ny maha samy hafa ny "E" sy ny "T" lafiny nizara roa mamaritra ny kofehy halaliny.
Ny haavon'ny amin'ny vozon'ny farany. Norefesiny hatramin'ny tampon'ny ny vozony ho amin'ny fotoana izay ny savaivony "T", fanitarana midina, intersects ny sorony.